Mahery sy matanjaka kokoa ilay fahavalontsika Izy
"Iza izao Mpanjakan'ny voninahitra izao? Jehôvah mahery tsitoha, Jehôvah mpiady mahery" - Sal. 24:8.
Manan-kery hamonjeny izao tontolo izao i Kristy. Tiany hovonjena ny olona rehetra. Tsy tiany hisy ho very na dia iray aza. [...] Natolony ho fanavotana ho an'ny maro ny tenany, dia ho an' ireo izay mandray ny tombontsoan'ny fahafahana hiverina amin'ny fahitsiana amin'Andriamanitra. Rehefa nanangana an'i Lazarosy tamin'ny maty Izy, dia fantany fa tsy maintsy mandoa ny saran'izany aina izany eo amin'ny hazo fijalian'i Kalvary Izy. Tsy maintsy nahatonga ny fahafaham-baraka lalina indrindra Taminy ny fanafahana tsirairay nataony. Tsy maintsy nanandrana ny fahafatesana ho an'ny olona tsirairay Izy.
Nandritra ny fiainany teto an-tany dia naneho fahatanterahan-toetra i Kristy, ary nankato tanteraka ny didin'ny Rainy. Tsy nanota Izy raha tonga teto an-tany tamin'ny endrik'olombelona, raha lasa teo ambanin'ny lalàna, raha naneho tamin'ny olona fa nentiny ny aretin'izy ireo sy ny olany ary ny fahamelohany. Afaka nilaza tamin'ireo Fariseo Izy nanao hoe: "Iza moa aminareo no mampiseho Ahy ho nanota?" Tsy nahitana na dia pentim-pahotana kely akory aza Izy. Nitoetra ho ilay Zanak'ondry tsy misy kilema teo anatrehan'izao tontolo izao Izy.
Noho ny fahazavan'ny fahadiovany, dia hitan'ny Mpamonjy izao tontolo izao fa ireo aretina izay mampahory ny taranak'olombelona dia vokatry ny fandikan'izy ireo ny lalàn'Andriamanitra. Fantany ny loharano niandohan'ny trangam-pahoriana rehetra. Tamin'ny tranga rehetra dia hitany ny fiafarana ratsy sy mahonena vokatry ny tsy fetezan'ny mpanota hibebaka. Fantany fa Izy irery no afaka manavotra azy ireo avy tao amin'ny lavaka izay nahalatsahany. Izy irery no afaka mametraka ny tongotr'izy ireo amin'ny lala-marina. Ny fahatanterahany irery ihany no afaka mameno ny tsy fahatanterahan'izy ireo. Izy irery no afaka manarona ny fahamenaran'izy ireo amin'ny alalan'ny akanjom-pahamarinany tsy misy pentina (...) Manan-kery hamonjy Izy. Ao amin'Ilay Mahery no ahitana famonjena. Amin'ilay tanany amin'ny maha-olombelona Azy no amihinany ny olona, ary amin'ilay tanany amin'ny maha-Andriamanitra Azy kosa no amikirany amin'ilay Mahefa ny zava-drehetra. YI, 29 Martsa 1898